MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA DAHABKA PYRENEES IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Dahabka Pyrenees iyo Sawiro
Daaha Dahabka / Eeyda Noocyada Isku-dhafan ee Dahabka ah
'Tani waa Pyrenees-kayga Dahabka ah, Saige. Waxay ku saabsan tahay 7 sano jir, waxayna leedahay dabeecadda ugu macaan ee Dahab, marwalba way baryaysaa xayawaanka raba inay daryeesho Chihuahua sida eey. Waxay 'difaacdaa' gurigeenna iyadoo ku qaylinaysa wax walba, xitaa habeenkii. Iyada oo leh dhogorteeda oo dhan, si kulul ayey u kululaataa oo waxay jeceshahay inay seexato dhulka ku xiga hawo-mareenkaaga. Socodyadu waa waxa ay adduunka ugu jeceshahay, gaar ahaan kuwa ka baxsan xadhigga. Qadar socod ah kuma filna. Waxaan ka soo samatabbixinay gurigeedii ugu horeeyay, halkaasoo ay kula noolayd walaalkeed nolosheeda oo dhan. Marnaba looma oggolaan inay soo gasho, markaa hadda iyadu waa la oggolaaday walaac oo wuxuu ka baqayaa onkodka. Imika iyada ayay nala nooshahay, ku seexashada sariirta iyo sariiraha waa mid ka mid ah waqtiyadeedii hore ee ay aadka u jeclayd. Weligeed looma baran inay wax soo qaadato, laakiin iyadu waxay fiirsataa eeyadayada yaryar oo mararka qaarkood way nala ciyaari doontaa. Saige wuxuu jecel yahay inuu leefleeco faraha carruurta yar yar wuxuuna u taagan yahay sidii isagoo rabaayad ah. ' —Dhibco Sawir ah Robin Houck (Teneyes)
shaybaarka qasan bulldog Maraykanka
Pyranees Dahab ah
Pyrenees-ka Dahabka ahi ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Dahab dahab ah iyo Pyrenees weyn . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Pyrenees Dahab ah
Diiwaanka Taranka Nakhshadeeye = Pyranees Dahab ah
Naadiga Naqshadeeyaha eeyaha Naadiga Kaynta = Pyrenees Dahab ah
Diiwaanka Canine-ka Caalamiga ah ee naqshadeeye®= Pyrenees Dahab ah
'Hello, kani waa mid ka mid ah eeyadayda oo loo yaqaan Charlie He is a Pyrenees Golden. Wuxuu ku dhashay dhamaadka Janaayo 2008 Saskatchewan. Charlie waa eey gadaal u jiifay, socod fudud oo saaxiibtinimo badan. Saaxiibkiisa ugu fiican waa wiilkeyga 12 jirka ah waa ciyaar fiican. Wuxuu leeyahay dabeecad a Pyrenees weyn wuxuu jecel yahay inuu daawado aduunka oo socda, laakiin markuu banaanka ku ciyaarayo kubad wuu jilicsan yahay sida a Dahab dahab ah . Charlie ma aha eey aad u firfircoon. Waxaan aadeynaa park eey inta jeer ee aan kari karno jiilaalka iyo maalmaha badankood xagaaga wuxuu ordaa ilaa 30 daqiiqo ka dibna wuxuu fiirinayaa hooyo iyo aabe inay guriga aadaan. Charlie ayaa la nool laba bisadood in uu la jaan qaadayo mid weyn, mid mas , iyo laba Maanta Weyn loogu magac daray Stella (waa caddaan deenish ah iyadu waa dhagoole ) iyo Dexter, oo ah Dane go 'ah oo hadda noo yimid bishii Janaayo ee 2010. Waxaan ku tababaray eeyadayda anigoo kaashanaya Cesar Millan iyo Brad Pattison, oo ah martigaliyaha' Dhamaadka Leashkayga. ' Bandhigyada iyo buugaagta labaduba waxay iga caawiyeen aniga iyo qoyskeygaba inaan helno xirmo deggan oo aadanaha oo dhan ay yihiin hoggaamiyeyaal xirmo. Waxaan labadaba ku leeyahay adduunyo mahadnaq ah. Anigoon ogeyn tilmaamaha tababarka ee aan bartay gurigeygu wuxuu noqon lahaa meel cabsi leh oo aan booqdo kuna noolaado. '
Charlie the Pyrenees Golden isagoo seexanaya sagxadda dhulka
Lucy Pyrenees-ka Dahabka ah (Isku-darka Pyrenees Weyn / Isku-dhafka Dahabka Dahabka ah)
'Tani waa eeygayga Luke 6 sano jir. Isagu waa Pyrenees Dahab ah oo aan ka helnay hoygayaga deegaanka ee NC. Aad buu u macaan yahay wuxuuna caan ku yahay xaafadeena sida qof walba u jecel yahay. Markii aan helay, wuxuu ahaa 40 rodol 1.5 jir. Wuxuu baadi goobayay sanadahaas 1.5 wuxuuna quudiyay cunista cunnooyinka badanaa. Markii aan soo galnay gudaha, ma uusan garanaynin waxa uu ku sameeyo jaranjarooyinka sidaa darteed waa inaan u qaadayaa kor iyo hoos jaranjarada si aan wax u baro. Aynu nidhaahno wuu ubaxsaday tan iyo markii aan gurigii keenay, oo isagu haatan miisaankiisu yahay 110 rodol. Isagu waa eeygii ugu fiicnaa ee aan abid soo marno wuxuuna si aad ah ugula talin lahaa isugeyntiisa. Jidhkiisu kuma laha laf celis. '
'Fen waa kow iyo toban toddobaad jir Pyrenees weyn / Dahab dahab ah isku dar ah oo aan ka soo badbaadinay hoygeena deegaanka. Isagu waa sawirka labada nooc ee uu aadka ugu wanaagsan yahay carruurta, xitaa da 'yar oo noocaas ah, jilicsan, caqli badan oo caajis badan. Wuxuu miisaankiisu yahay 30 rodol sawirradan, wuuna weynaanayaa maalinba maalinta ka dambaysa. '
Fen Pyrenees-ka Dahabka ah sida eey markay tahay 11 toddobaad jiifsanaya cawska
st. isku dar ah shaybaarka bernard
'Fen wuxuu hada jiraa 6.5 bilood iyo 70 rodol. Koodhkiisu wuxuu leeyahay qaab dahabi ah, laakiin gabi ahaanba looma buuxin sida Pyrenees. Waxa uu heystaa heer tamar oo aad u hooseeya laba socod oo 20-daqiiqo ah maalintii ayaa isaga ku filnaan doonta. Wuxuu cunaa qiyaastii laba koob maalintii wuxuuna ilaaliyaa culeys aad u caafimaad qaba. Dhaqtarkayaga xoolaha ayaa rajeynaya inuu kudhowaad yahay 115-120 rodol asaga oo qaangaar ah oo dhererkiisu yahay 30 in garabka.
Wuxuu leeyahay dabeecadda difaac ee Pyrenees, eey waardiye fiican ah. Si aad ah ayuu u tababaray ilaa iyo haatan wuxuuna ku fiicanyahay howlaha culus. Fen wuxuu sifiican ulaqabsadaa dadka cusub iyo xaaladaha, wuxuuna hada ka shaqeynayaa sidii loo heli lahaa shahaadadiisa dhalashada wanaagsan ee Canine. '
Fen Pyrenees-ka Dahabka ah sida eey markay 6 1/2 bilood jir fadhido dhinaceeda geedka Christmast
Fen Pyrenees-ka Dahabka ah sida eey markay tahay 6 1/2 bilood jir oo socdaal ku tagaya gaariga
chihuahua Boston muqisho isku darka Pit
Eeg tusaalooyin badan oo Pyrenees Dahab ah
Sawirada Dahabka Pyrenees 1
Liistada eeyaha waaweyn ee loo yaqaan 'Pyrenees Mix Mix'
Liistada eeyaha 'Retriever Mix' ee loo yaqaan 'Mix' eeyaha eyda
Liiska Eeyaha Af-madow
Ciyaal yaryar, waxa aad u baahan tahay ... iyo waxa aad u baahan tahay inaad sameyso ... Caawinta iyo Barbaarta Ey
Macluumaadka iyo Sawirrada eeyaha Digaagga Digaagga ee Danmark
Liistada eeyaha Yaryar ee Daabacaha ah ee Loogu Tala Galay
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha
Macluumaadka Taranka Eeyaha Pyrenees Pit Dog iyo Sawirro
Xuduudaha Collie Bernard Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Liistada eeyaha Greyhound Talyaani ee Isku-dhafka ah
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha ee Saint Shepherd
stern bernard retriever mix eey
jack russell terrier iskudhaf yar oo isku dhafan
eeyaha ugu fiican eeyaha kale
shar pei iyo bulldog mix